OLONA MARO NO EFA NAHAZO TOKANTRANO AVY TAMIN'NY ALALANY
Anisan’ny mahazo vahana manerana an’izao tontolo izao ankehitriny ny fitadiavana namana na vady amin’ny alalan’ny internet. Maro tokoa ny olona no mitsidika ireny tranokala isan-karazany ireny mba hikaroka izay mety mahasoa sy mifanentana aminy. Misy anefa ny manao hosoka sy mandainga ary tena mamitaka mihintsy aza amin’izy ireny ka tsy vitsy ireo tovovavy na vehivavy no diso fanantenana vokatr’izany. Ireo antsoina hoe “agence matrimoniale”, dia anisan’ny toerana ahafahana mitady vady na namana ihany koa. Matotra sy azo antoka ny ankamaroan’izy ireny. Efa manana ireny “agence matrimoniale” ireny ihany koa isika eto Madagasikara na dia vitsy ihany aza izy ireny amin’izao fotoana. Iray amin’izany ny “agence RECIPROQ”, izay manana ny foiben-toerany eny Ampandrana ary tantanin-dRajaonarison Lalaina, tovolahy tanora sady sariaka ary mahay mandray olona. Nianatra manokana mikasika ny “droit matrimonial” sy ny psikolojia ny tenany ary izany indrindra no nanosika azy hanangana ity toerana ahafahana mitady izay ho taolan-tehezana na namana fotsiny ihany koa ity.
Manao ahoana tokoa ary ny fandehan’ireny “agence matrimoniale” ireny eto amintsika ? Olona toa inona no manatona azy ireny ? Tena misy tokoa ve ireo tafavoaka ho mpivady sa nanao ahoana ? Ho valin’izany dia indro ny resadresaka nifanaovanay tamin-dRajaonarison Lalaina, teny amin’ny toera-piasany eny Ampandrana ny 23 May 2013 lasa teo.
VOHIZO : Tsy mbola mahavantana ny olona loatra izany manatona “agence” izany raha hitady vady, indrindra fa raha isika Malagasy no tenenina. Mbola vitsy ihany koa ny Malagasy no mahafantatra fa manana izany isika eto Madagasikara. Firy taona moa izay no nisian’ity agence RECIPROQ tantaninao ity ?
LALAINA : 8 taona izay, izany hoe ny taona 2005 no nananganako ny agence RECIPROQ. Niainga tamin’ny fandinihana fa maro ny olona mamaly ireny “annonces” na fitadiavana namana ireny. Tao anatin’ny hetsika ara-barotra iray no nanaovako andrana tamin’izany. Nifandraika tamin’ny fianarana nataoko ihany koa moa ilay izy ka tsy nampananosarotra ahy ny nitantanana azy hatramin’izao. Marina fa tsy nahavantana ny olona tany aloha ny manatona agence raha hitady vady ary tena tsy eken’ny sain’ny Malagasy mihintsy izany, kanefa dia azoko lazaina fa maro ny olona nanatona ny agence RECIPROQ tao anatin’izay 8 taona nisiany izay. Nandalo krizy toy ny orinasa rehetra anefa izy kanefa tsy nampihemotra anay mpitantana akory izany.
VOHIZO : Karazana olona toa inona ary sokajin-taona manao ahoana ny mandalo sy manatona ity agence ity ? Firy isan-jaton’ireo olona tonga tato aminao no tafavoaka ary nahita vady tato amin’ny agence RECIPROQ ?
LALAINA : Karazan’olona maro, lahy sy vavy ary ny zandriny indrindra nandalo teto dia teo amin’ny 19 taona teo, ny zokiny indrindra kosa dia efa 80 taona. Raha tsinjaraina dia ireo eo anelanelan’ny 20-30 taona no maro an’isa indrindra satria dia mahatratra ny 70%-n’ny olona tonga teto aminay. Eo amin’ny 20% kosa ireo eo amin’ny salan-taona 30-40. Ny ambiny 10% dia ireo mihoatra ny 40 taona. Raha ny tahan’ireo olona tafavoaka ka nahita vady tato indray dia maherin’ny 50%. Fa ny tena anisan’ny zavatra nahafaly ahy indrindra ny nahita ireo olon-droa izay nivoaka ho mpivady voalohany tato amin’ny agence ny taona 2005. Ilay tovolahy 29 taona tamin’izany fotoana ary ilay tovovavy kosa 24 taona. Efa manan-janaka roa moa izy ireo ankehitriny.
VOHIZO : Misy zavatra hafa koa ve sahanin’ny “agence RECIPROQ” ?
LALAINA : Eny, ankoatran’ny fisian’ny agence RECIPROQ eto Antananarivo dia manana agence iray any Soisa sy Afrika Atsimo ihany koa tenako izay iarahako miasa amin’ny olona any an-toerana. Telo taona izao no nisian’ireo agences roa any am-pita ireo. Raha misy olona any Soisa te haka vady aty Madagasikara na any Afrika Atsimo dia io agence any an-toerana io no manao ny asa rehetra amin’izany. Dia mitovy amin’izay koa ny ataon’ny any Afrika Atsimo sy ny eto Madagasikara.
Ankoatra izany dia manao “organisation de mariage “ ihany koa ny RECIPROQ. Arakaraky ny fahefa-mividin’ny tsirairay no hanaovana izany. Ao ireo manam-bola izay mahatakatra ny “pack complet”, izany hoe ny agence no mikarakara ny zavatra atao rehetra mandrapahavitan’ny lanonana manontolo, manomboka any amin’ny fanamboarana ny peratra, ny fitafiana sy ny kojakoja miaraka aminy, ny sakafo sy ny zava-pisotro, ny toerana sy ny fanaingona, ny sary sy ny video… Ao koa ireo misafidy ny haka “pack” mitokana, ohatra sakafo na ny fitafiana fotsiny. Afaka manome fahafaham-po tanteraka izay mpivady maniry hanao izany eto amin’ny agence izahay tompon’andraikitra.
LALAINA : Mahafinaritra fa efa manomboka miova ny toe-tsain’ny Malagasy amin’izao fotoana. Hiditra amin’izany “agence matrimoniale” izany taloha dia toa natahorana sady nahamenatra koa angamba. Tsy misy intsony anefa izany sakana izany ankehitriny, porofon’izany ny fahitana ireo efa zokiolona mbola maniry hahita izay ho silany ato aminay.
Nanatontosa : Nanouh